Maqaal: Murashaxoow Hadaad Guuleysato Maxaa Ku Horyaal? (Maxaa Ka Taqaan Waaya Aragnimada Murashaxiinta)
Murashaxoow Hadaad Guuleysato Maxaa Ku Horyaal? (Maxaa Ka Taqaan Waaya Aragnimada Murashaxiinta)
Mohamed Abdullahi Farmaajo: -Murashaxa Tayo, muddo lix bil ku siman ayuu ahaa Wasiirka koowaad. Xilkaas ka hor, ma ahayn shaqsi hore siyaasadda looga yaqiin, laakin waxaa keenay waqtiga iyo awood-qaybsiga 4.5. Sida uu ku sheegtay taariikh-nololeedkiisa markii xilka wasiirka koowaad oo ka bilaabay jago siyaasadeed ee uu qabto, wuxuu degganaa muddo labaatan sanno ah, dalka Mareykanka oo jinsiyaddiisa heysto, wax ku bartay, ku guursaday, kuna ilmo dhalay. Maxamed Cabdullahi Farmaajo, wuxuu xilka ku waayay, marka uu la soo baxay siyaasado waddaniyad ku dhisan, maamul wanaag, ka xureynta dalka xoogagga argagixisada iyo muujin wadashaqeyn wadareed ee isaga, xukuumaddiisa iyo Madaxweynaha.
C/raxmaan Cabdullahi “Baadiyow”: -Waa aqoonyahan, ikhwaanu Muslamiin ah, qaybta Al-islaax. Laakin wuxuu ku sifeysan yahay soomaalinimo iyo u gargaare masaakiinta iyo kuwa noloshooda aan is-bixin karin, wuxuu muqdisho ka furay sagaashameeyadii ilaa hada xarumo nafaqeyn, laguna daweeyo dadka la nool Cudurada qaaxada “TB”. Sannadkii 2000 wuxuu ka mid ahaa dadkii dhidibada u taagay dowladdii Carte ee Jabuuti lagu soo dhisay. Wuxuu wax ka hirgeliyay Jaamacadda Muqdisho oo ah mid ka mid tiirarka ugu waaweyn ee tacliinta sare, ahna Jaamacadda ugu ballaaran ee Soomaaliya ka jira. Dalka inta uusan burburin, wuxuu ahaa, injineer iyo sarkaal ciidan ee XDS. Wuxuu wax ku bartay Somalia, Ex Soviet Union iyo Canada uu hadda deggan yahay, dhalashadeedana heysto.
Xaaji Maxamed Yaasiin Ismaaciil: -Wuxuu ku dhashay Mogadiscio, wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ilaa dugsiga sare ku qaatay Xamar, Tacliinta Sare dalalka dibadda. Abbihii Alle ha u naxariista Yaasiin Xaaji Ismaaciil Faahiye, wuxuu ahaa Comissario-yihii ugu dambeeyay ee Mogadiscio inta aan askarta iyo kaligii taliyihii dalka la wareegin. Xaaji Mohamed Yaasiin, wuxuu u cararay Europe, gaar ahaan, dalka Talyaaniga, oo ku noolaa inta ugu badan muddadii dalka ku jiray xukunkii kaligii taliyihii Afweyne. Wuxuu ahaa mucaarad weyn ee Europe si fican looga yaqiin, wuxuuna ku jiri jiray dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ee uu kaga soo horjeeday nidaamkii amar ku taagleynta iyo xukunkii qoriga caaraddii Somalia loogu talinaayay. Kadib Xaajigu wuxuu u soo wareegay inuu dego Africa iyo Waddamo ka tirsan Khaliijka Carabta. Wuxuu mar noqday wakiilka Raabidada Caalamka Islaamka u fadhiya dalalka koofureed ee Africa, xarun deegaanna waxaa u ahayd magaalada Harare, dalka Zimbabwi. Sannadkii 2002-2004, wuxuu ka qaybqaadanayay shirarkii Mbigathi, wuxuu ka mid noqday mruashaxiintii u tartamaysay jagada Madaxwyninimada, laakiin niyad jab ayuu ka qaaday.
Abdullahi Ahmed Caddow: – Waa oday da’ ah, waayo arag siyaasadeed, dibloomaasi iyo rugcaddaa dhinaca maamulkaba ah. Xuriyadda intaan la qaadan, wuxuu ahaa sarkaal sare iyo taliye ku xigeenkii ciidanka ilaalada Canshuuraha, Guardia Finenze. Xuriyaddii kadibna, wuxuu noqday Agaasimihii Guud ee Wasaaradda Maaliyadda, Guddoomiyihii Bankiga Dhexe iyo Safiirka Somalia ee Washington.
Mohamed Nur Galal: -Waa murashax waayo araganimo qoto-dheer leh, xilal siyaasadeed iyo kuwo milatariba soo qabtay. Darajada ciidamada wuxuu ka gaaray Jeneraalnimo welibana ka mid ah kuwa Somalia uga tayada iyo aqoonta fiican leh, wuxuu ku taqasusay dhinacayda difaaca, nabadgeliyada, hoggaaminta iyo howlgelinta ciidamada.
Madaxweyne Shariif: Wuxuu ku dhashay magaalada Jowhar, sanadkii 1964-kii, waxbarashadiisana wuxuu ku dhameystay magaalada Muqdisho, magaalooyinka Khartoum iyo Tripoli ayuu ku dhameystay waxbarashadiisa heerka Jaamacadeed, isagoo shahaadada Bachelor Degree ee luuqada Carabiga iyo Juqraafiga ka qaatay Jaamacadda Aldalanj. wuxuuna Bare ka noqday dugsiyada sare ee dalka, isaga oo dhigay duruusta juquraafiga, Carabiga & diinta Islaamka.
Shariif Xasan Sh. Aadan: Guddoomiyaha Baarlamaanka waa Siyaasi mudo 8 sano gudahood ka qalin jabiyay siyaasaddaha qalafsan, is barbaryaaca iyo khilaafaadka hareeyay. , dhinaca aqoontiisa dad badan ayaa tura iyo inuusan laheyn shahaadooyin waxbarasho, laakiin dhinaca ganacsiga ayuu xariif ku ahaa, isagoo ka beec mushtara wax kasta oo danahiisa ku jira.
Cali Maxamed Geeddi:- Waa nin reer Xamar ah, ku dhashay, kuna barbaaray Mogadicio, waxbarashadiisa aasaasiga ilaa tacliinta sare wuxuu ku dhameystay Xamar, wuxuuna bartay cilmiga daaweynta Xoolaha, wuxuu kasoo jeedaa qoys caadi ah, Aabihiina wuxuu ahaa Sarkaal sare oo ciidamada nabadsugida ah.
Prof. Axmed Ismaaciil Samatar:- wuxuu ku dhashay Gebiley, intii uusan soo gelin Xamar horaantii Lixdameeyadii, waxbarashadiisii kusoo qaatay Camuud. shaqadii ugu horeysay wuxuu ka bilaabay Radio Muqdishu, isagoo ka mid ahaa Wariyeyaasha ugu fiican, markuu warka tabinayo in la dhageysto la jecel yahay, inkastoo heysan xirfad Journalism ka hor intuusan shaqada saxaafadeed bilaabin.